Mody nofaina ny fiara: novonoina ny mpamily ary nalevina tanaty ala | NewsMada
Nampihoron-koditra! Voasambotry ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) tany Mahavelona, distrikan’Ankazobe, ny zoma teo ireo jiolahy efatra tompon’antoka tamina halatra fiara narahina vonoan’olona feno habibiana…
Niaiky ny heloka vitany ireto jiolahy efa-dahy ireto, nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Araka ny fampitam-baovao voaray, tao anaty tambajotran-tserasera “facebook” ny nifampiresahan’ireo jiolahy sy ny tompon’ny fiara Starex iray. Nifampiresaka tamin’ny tompony ry zalahy ary nilaza fa hanofa ilay fiara hoentina hanaovana fangataham-bady any Andranovelona RN 4. Nanaiky ilay tompon’ny fiara taorian’ny fifampiresahana ary tonga soa aman-tsara teny Andranovelona ilay toerana nifanarahana tamin’ireo jiolahy. Tsy nijanona teo anefa fa narebirebin’ireo olon-dratsy ilay tompony ka niitatra ary nilaza ireo olon-dratsy fa hampiana 150 000 Ar ny vola nifanarahan’izy ireo tany am-boalohany. Kanjo, novonoin’ireo jiolahy ilay tompon’ny fiara rehefa afaka an’Andranovelona. Nihazo ny kaominina Mahavelona ireo jiolahy taorian’izany niaraka amin’ilay fiara sady hamonjy ilay fofombady hisehoan’izy ireo. Tonga tao amin’ny kaominina ry zalahy ary nampiahiahy ny olona ny fihetsik’izy ireo niaraka tamin’ilay fiara sy ny fitsaboan’izy ireo ny namany iray naratra. Tsy fantatra anefa ny zava-niseho fa nafenin’ireo jiolahy tao amin’ny toerana antsoina hoe Mangarano, ny talata 8 janoary 2019 ity fiara ity. Nampilaza tamin’ny mpitandro filaminana avy hatrany ny tompon’andraikitra tao an-toerana noho ny fisian’ity fiara hitan’izy ireo ity.
Mivarahontsana ireo mpampanofa fiara…
Nametraka fitarainana teny amin’ny polisin’ny BC ny fianakavian’ilay mpamily noho ny tsy fahitan’izy ireo ny havany. Nifanojo indrindra tamin’ity fitoriana voarain’ny polisy ity koa ny momba ny fisian’ity fiara Starex hita any amin’ny kaominina Mahavelona ity. Nanao fanadihadiana sy fikarohana ny polisy ka niainga avy amin’ilay fofombadin’iray amin’ireto jiolahy ireto ny fanadihadiana natao. Noraisim-potsiny izy efa-dahy taorian’izany sy ny olona efa nikasa handray ilay fiara, ny zoma lasa teo. Niaiky izy ireo fa tena namono ilay tompon’ny fiara ary nanoro ny toerana nandevenan’izy ireo azy, tany Ambohibe, 3 km miala ny sampanana mihazo an’i Mahavelona. Hita tao tokoa ny fatin’ilay mpamily. Araka ny fanazavana voaray, mpiasa amina hopitaly iray eto an-drenivohitra ity mpamily ity.
Manoloana izany, mihorohoro ireo olona misehatra ao anatin’ny fandraharahana momba ny fampanofana fiara amin’ny trangan-javatra toy izao. Tsy azo antoka intsony ny fandriampahalemana.